အခုချိန် နေပြည်တော်သွားရန်ရှိပါက စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဒါတွေစစ်ပါတယ် - Bahuthutagabar
အခုချိန် နေပြည်တော်သွားရန်ရှိပါက စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဒါတွေစစ်ပါတယ်
September 1, 2020 Bahuthutagabar ပြည်တွင်းသတင်း 0
“နေပြည်တော်သို့ လာသူများ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် ပြသနိုင်ရပါမည်”
(၁)အစိုးရ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခရီးသွားလာခွင့်အမိန့် MO ပြသနိုင်ရပါမည်။
(၂) ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရ / ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံခြား သားများ / လူပုဂ္ဂိလ်များ / အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည် ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ / ဝန်ကြီးဌာန ၏ ခေါ်စာ ပြသနိုင်ရမည်။
(၃) ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ / ပြည်သူများ အနေ ဖြင့် မိမိတို့ နေထိုင်သည့် နေရာ ရပ်ကွက်မှ အဆို ပါ နေရာတွင် မိမိ အမှန်တကယ် နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံစာ ပြသရပါမည်။
၇ရက် အတွင်းသာ အဆိုပါ ထောက်ခံစာသည် တရားဝင်ပါသည်။( နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ပါက passport / visa ပါ ပူးတွဲပြသရပါမည် )
(၄)ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်/ နိုင်ငံခြားပြန် ဖြစ်ပါက ပြန်လာသူမှန်သမျှ Q ဝင်ရပါမည်
(၅) ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာ / ကျန်းမာကြောင်း ထောက်ခံစာ လုံးဝ မလိုပါ ဂိတ်မှာ လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါမည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက နေပြည်တော် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန ( 067- 550294) သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အခုခြိနျ နပွေညျတျောသှားရနျရှိပါက စဈဆေးရေးဂိတျတှငျ ဒါတှစေဈပါတယျ
“နပွေညျတျောသို့ လာသူမြား အောကျပါ အခကျြအလကျမြားကို စဈဆေးရေးဂိတျမြားတှငျ ပွသနိုငျရပါမညျ”
(၁)အစိုးရ ဝနျထမျးဖွဈပါက သကျဆိုငျရာ ဝနျကွီးဌာန၏ ခရီးသှားလာခှငျ့အမိနျ့ MO ပွသနိုငျရပါမညျ။
(၂) ပွညျထောငျစုအဆငျ့ အစိုးရ / ဝနျကွီးဌာနမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျဆောငျရှကျသညျ့ နိုငျငံခွား သားမြား / လူပုဂ်ဂိလျမြား / အဖှဲ့အစညျးမြား အနဖွေငျ့ သကျဆိုငျရာ ပွညျ ထောငျစု အစိုးရ အဖှဲ့ / ဝနျကွီးဌာန ၏ ချေါစာ ပွသနိုငျရမညျ။
(၃) ပုဂ်ဂလိက ကုမ်ပဏီမြား / ပွညျသူမြား အနေ ဖွငျ့ မိမိတို့ နထေိုငျသညျ့ နရော ရပျကှကျမှ အဆို ပါ နရောတှငျ မိမိ အမှနျတကယျ နထေိုငျကွောငျး ထောကျခံစာ ပွသရပါမညျ။
၇ရကျ အတှငျးသာ အဆိုပါ ထောကျခံစာသညျ တရားဝငျပါသညျ။( နိုငျငံခွားသား ဖွဈပါက passport / visa ပါ ပူးတှဲပွသရပါမညျ )
(၄)ရခိုငျပွညျနယျပွနျ/ နိုငျငံခွားပွနျ ဖွဈပါက ပွနျလာသူမှနျသမြှ Q ဝငျရပါမညျ
(၅) ကနျြးမာရေးထောကျခံစာ / ကနျြးမာကွောငျး ထောကျခံစာ လုံးဝ မလိုပါ ဂိတျမှာ လိုအပျသော စဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျပါမညျ။
အသေးစိတျ သိရှိလိုပါက နပွေညျတျော ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာန ( 067- 550294) သို့ ဆကျသှယျ မေးမွနျးနိုငျပါသညျ။
လတ်တလောမှာ နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်လျှင် အိမ်မှာပဲနေပါ
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ မှ သိန်းတစ်ထောင်ဆုရှင် ပေါ်ထွက်လာ
BAHUTHUTAGABAR provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://bahuthutagabar.net/ (example - News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music ...etc). Hope our vistors enjoy our website.
၀မ်းဗိုက်က အဆီတွေကို အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ကျစေမယ့် Detox Water များ
သင့်ဘဝမှာ ဒီလူ (၆) မျိုးကို လက်မလွတ်ပဲ တစ်သက်လုံး ပေါင်းပါ